Franck Kessie ayaa ilig laga tuuray kulankii AC Milan ay 3-1 ku garaacday Napoli Axaddii, laakiin daawayn kooban oo loogu sameeyey garoonka bannaankiisa, waxa uu ku noqday garoonka si uu kooxdiisa uga caawiyo inay guusha kulanka qaadato.
Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Stadio San Paolo ee hoyga Napoli ayaa waxa Laacibka reer Ivory Coast ee Franck Kessie uu dhibbane u noqday gacanta Matteo Politano oo si aan loogu talo-gelin afka ugaga dhacday, waxaana markiiba uu is qabtay afka iyadoo uu mid ka mid ah ilkihiisu dhacay.
Bannaanka garoonka ayay dhakhaatiirta kooxdiisu kula tacaaleen inay ka caawiyaan inuu dhiigu ka joogsado, sidoo kalena uu awoodi karo inuu ciyaarta sii wato.
Xiddigan kubbad-burburiyaha iyo dhisahaba ah oo tiir dhexaad u ahkooxda tababare Stefano Pioli ayaa si lama filaan ah ugu soo laabtay garoonka, waxaanu dhamaystay ciyaarta isagoo ka caawiyey AC Milan inay guushii lixaad ee xili ciyaareedkan gacanta ku dhigto.
Subaxnimadii Isniinta ayaanu tegin tababarka kooxdiisa, waxaanu u baxay inuu dhakhtar ilkaha u xidha kula kulmo magaalada Milan, kaas oo isaguna hawlgalkiisa ku guuleystay, sida uu sheegay Milan TV.
Franck Kessie oo AC Milan u ciyaarayay tan iyo xagaagii 2017kii oo uu markii hore heshiis amaah ah ugu yimid ka hor intii aan sannadkii 2019kii heshiiskiisa loo beddelin mid rasmi ah.
Rukun aasaasi ah ayuu u ahaa kooxdiisa tan iyo markii uu uga yimid Atalanta, waxaanu xili ciyaareedkan saftay dhamaan siddeeddii kulan isagoo dhaliyey laba gool, sidoo kalena hal gool oo kale caawiye ka noqday.
The best way to Lose Weight: 38 Ideas RDs Say You Should Observe